Umnqophiso kaThixo nabantu bakhe abakhethiweyo kunye nokuhlubuka kwabo
IiVangeli ziboniswa ebhokisini likaPapa John Paul II, ngoMeyi 1, 2011. (Ifoto nguVittorio Zunino Celotto / Getty Images)
Kule, iveki yesithathu yeLente , sisoloko sifumana isisombululo sethu siqala ukuhamba. Yintoni eyayiza kukulimaza ukuba ube neqatha enye yetshokoleji, okanye isiselo sincinane? Mhlawumbi ndiza kubukela iindaba ezibububusuku, xa nje ndingaboni enye iTV. Ndiyazi ukuba andiyi kuhleka , kodwa oku kuluhlaza nje ukulinda kude kube yiPasika . . .
AmaSirayeli, nawo, ahamba ngamaxesha apho ukuzibophezela kwabo kwehla, njengoko uThixo wayebakhokela entlango ukuya kwiLizwe Lesithembiso . KwiSibhalo seSithathu kwiVeki yeLente, sibona uThixo ewenza umnqophiso wakhe kunye nabantu abakhethiweyo kwaye eqinisekisa ngedini legazi. Kodwa xa uMoses ekhuphukela eNtabeni yeSinayi iintsuku ezingama-40 ukuze athole iMithetho Eyishumi , amaSirayeli ahlubuka, ecela uAron ukuba ayenze ithole legolide ukuze likhulekele.
Kulula kangakanani ukulibala konke okuhle uThixo asenzele sona! Ngethuba leentsuku ezingama-40 , siya kuhendwa ngamaxesha amaninzi ukuba sijike umqolo wethu kulawo maLenten oyalela ukuba senze sisondele kuThixo. Ukuba sithetha nje , ke, umvuzo uya kuba mkhulu: ubabalo oluvela ekunikezela ubomi bethu kuKristu.
Ukufundwa kwimihla ngemihla yeSonto leThathu leLente, elifunyenwe kumaphepha alandelayo, livela kwi-Ofisi yeZifundwa, inxalenye yeLiturgy yeeyure, umthandazo osemthethweni weCawa.
Ukufunda kweZibhalo kwiSonto leSithathu leLente
UAlbert waseSternberk, waseTrahov, iTrabhu yaseTranshov, iRiphabliki yaseCzech. UFred de Noyelle / Getty Izithombe
Isityhilelo sikaMoses kuMoses asizange siphele kunye neMithetho Eyishumi . INkosi inikeza imiyalelo malunga nendlela amaSirayeli aya kuphila ngayo, kwaye ezi zibizwa ngokuba yiNcwadi yesivumelwano.
Njengemiyalelo elishumi, le miyalelo, njengenxalenye yomthetho, zonke ziqulethwe ngumyalelo omkhulu wokuthanda uThixo ngentliziyo yakho yonke nomphefumlo wakho kunye nommelwane wakho njengoko uzithanda wena .
IEksodus 22: 20-23: 9 (iDayay-Rheims 1899 yaseMelika)
[INkosi yathi kuMoses:]
Lowo uhlabela oothixo, uya kubulawa, ngaphandle kweNkosi kuphela.
Musa ukumbetha umfokazi, ungambandezeli; ngokuba nani ngokwenu naniyizihambi ezweni laseYiputa. Awuyi kulimaza umhlolokazi okanye inkedama. Ukuba uya kubaphatha kakubi, baya kudanduluka kum, ndive ukukhala kwabo. Ukuvutha kwam kuya kutshabalala, ndikubethe ngekrele, nabafazi benu babe ngabahlolokazi, nabantwana benu bangenaswele.
Ukuba uboleka imali kubo bonke abantu bam abahlwempuzekileyo, abahlala nawe, abayi kuba nzima kubo njengabaphangi, ningabanyanzelisi ngamanxuwa.
Ukuba uthetha ummelwane wakho isambatho njengesibambiso, uya kumnika kwakhona ngaphambi kokushona kwelanga. Kuba yona yinto ephela enxibekileyo, ingubo yomzimba wakhe, andinanto yokulala nayo; ukuba uyakhala kum, Ndiya kuliva, ngokuba ndiba novelwano.
Uze ungathethi kakubi ngoothixo, ungatyeki nesikhulu sabantu bakho.
Ungazilibazisi ukuhlawula okweshumi kunye neentlahlela zakho; uya kunika izibulo koonyana bakho kum. Uze wenze okufanayo nangamazibulo enkomo zakho nangeegusha; mazibe ngumhla wesibhozo iintsuku ezisixhenxe, undiphe lona ngomhla wesibhozo.
Niya kuba ngabantu abangcwele kum; inyama endiyila inyama phambi kwexesha, ningadli, kodwa niyilahle ezinjaneni.
Awuyi kwamkela ilizwi lobuxoki; ungabambani isandla sakho ukunikela ubungqina bobuxoki ngomntu ongendawo. Ungayilandela isihlwele ukuba wenze okubi; ungaze ubeke umgwebo, kwimbono enkulu, ukuba ulahleke kwi nyaniso. Ungamkeli osihlwempu ngokugweba.
Ukuba udibana neenkomo zakho zeentshaba okanye iesile lilahlekile, buyisele kuye. Ukuba ubona iesile lalowo umthileyo ulele phantsi komthwalo wakhe, awuyi kudlula, kodwa umphakamise naye.
Uze ungaphambukeli kumgwebo womntu osweleyo.
Uza kubhabha ulale. Umntu ongenatyala nolungileyo makambulali; kuba ndiyanyanyela ababi. Ungathathi isifumbathiso, senza imfama imfama, uphambukise amazwi amalungisa.
Ungamthulisi umphambukeli, ngokuba uyazi iintliziyo zabantu abangaziwayo; ngokuba nani ningabafo ezweni laseYiputa.
Umthombo: Douay-Rheims 1899 I-American Edition yeBhayibhile (kwiphakathi yoluntu)
Ukufunda kweZibhalo ngoMvulo weveki yesithathu yeLente
Indoda idumbisa ngeBhayibhile. Peter Glass / Design Pics / Getty Izithombe
Umnqophiso kaSirayeli kunye neNkosi uqinisekiswa ngedini kunye nokufafaza kwegazi kubantu bakaSirayeli. UMoses ngoko ubizwa ngokuba nguNyana ukuba akhuphuke eNtabeni yeSinayi ukufumana iipilisi zamatye eziMithetho elishumi . Uchitha iintsuku ezingama-40 nobusuku kunye neNkosi.
NjengoKristu entlango ekuqaleni kobulungiseleli bakhe, uMoses uqala indima yakhe njengommangaleli ngeentsuku ezingama-40 zokuzila nokuthandaza phambi kweNkosi. Igazi elifafazwe ebantwini bakwaSirayeli lifanekisela igazi leNtsha mnqophiso, iGazi likaKrestu, eligalelwe kwiMnqamlezo kwaye linikezela kwakhona kuyo yonke iMisa .
IEksodus 24: 1-18 (Douay-Rheims 1899 yaseMelika)
Wathi kuMoses, Khuphukela eNkosini, wena, noAron, noNadabhi, noAbhihu, namashumi asixhenxe amadoda amakhulu akwaSirayeli, nimkhonze kude. UMoses wedwa uza kunyuka waya eNkosini, kodwa abayi kusondela; abantu abayi kuza naye.
Wafika ke uMoses, wabaxelela abantu onke amazwi kaYehova, nayo yonke imimiselo; bonke abantu baphendula ngelizwi elilodwa, sithi, Siya kwenza onke amazwi eNkosi awawathethileyo. UMoses wabhala onke amazwi eNkosi; wavuka ekuseni wakha isibingelelo entabeni yentaba, nezibini ezilishumi elinambini ngokwezizwe ezilishumi elinesibini zakwaSirayeli.
Wathuma amadoda amancinane ebantwaneni bakoSirayeli, wawazisa amadini, wahlabela amaxhoba amathole eNkosini. UMoses wathabatha isigxina segazi, wayifaka ezityaweni; ke yena wathambisa phezu kwesibingelelo. Wawuthabatha incwadi yomnqophiso, wawafunda ezindlebeni zabantu; bathi, Zonke izinto uYehova azithethileyo siya kwenza, siya kuthobela. Wathabatha igazi, wafafaza ebantwini, wathi: Leli ligazi lomnqophiso uYehova awenzile nani malunga nawo onke la mazwi.
Wenyuka ke uMoses noAron, noNadabhi, noAbhihu, nabamashumi asixhenxe abangamadoda akwaSirayeli; bambona uThixo kaSirayeli; phantsi kweenyawo zakhe njengento yamatye esafire, kunye nezulu, xa kucace. Akazange abeke isandla sakhe phezu koonyana bakaSirayeli, abafuduka emka kude, bambona uThixo, badla, basela.
Wathi uYehova kuMoses, Khuphukela kum entabeni, ube khona; ndiya kukunika iitafile zamatye, nomthetho, nemithetho endikubhalileyo, ukuba ufundise. UMoses wasukuma, nomlungiseleli wakhe uYoshuwa; uMoses wenyuka waya entabeni kaThixo, wathi kumadoda amadala: "Hlalani apha, size sibuyele kuwe." Unayo uAron noHure kunye nawe: ukuba kukho nawuphi umbuzo oza kuvela, uya kubhalela.
Ke kaloku, xa uMoses enyuka, ilifu lamboza intaba. Uzuko lweNkosi lwahlala phezu kweSinayi, lugubungela ngelilanga iintsuku ezintandathu; ngosuku lwesixhenxe wamemeza phakathi kwelifu. Ukubona kozuko lweNkosi kwakunjengomlilo ovuthayo entabeni yentaba, emehlweni oonyana bakaSirayeli. UMoses wangena phakathi kwelifa, wenyuka waya entabeni; wahlala khona iintsuku ezingamashumi amane, nobusuku obungamashumi amane.
Ukufunda kweZibhalo ngeLwesibini kweveki yesithathu yeLente
IBhayibhile yeqabunga legolide. Jill Fromer / Getty Izithombe
Ngaphambi kokuba uMoses enyukele entabeni yaseSinayi , amaSirayeli aqinisekisa umnqophiso wabo noThixo. Kwiintsuku ezingamashumi amane kamva, njengoko bekulindele ukuba uMoses eze, bahlubuka yaye uAron wakha ithole legolide , apho bazinikela khona. Ukungenelela kukaMose kuphela kukusindisa amaSirayeli kwiqumbo likaThixo.
Ukuba amaSirayeli, awakhululwe eYiputa aze abone ubuqaqawuli beNkosi abonakalisile efini kwiNtaba yeSinayi, unokuwa ngokukhawuleza kwisono, simele sikhuthele kangakanani ukuphepha isilingo! Ziziphi izithixo esizibeka rhoqo phambi koThixo, ngaphandle kokuqonda ukuba senza njalo?
I-Eksodus 32: 1-20 (iDayay-Rheims 1899 yaseMelika)
Abantu bebona ukuba uMoses wayelibele ukuhla entabeni, bebuthela uAron, bathi: Sukuma, senze oothixo, oya kuhamba phambi kwethu; kuba uMosis, indoda eyasikhupha ezweni laseYiputa, , asiyazi into eyenzekayo kuye. Wathi uAron kubo, Thatha amacici egolide ezindlebeni zabafazi benu, noonyana benu neentombi zenu, nizise nazo.
Abantu benza oko wayewisele umthetho, beza namacici kuAron. Ke kaloku, xa ebamkele, wabenza ngomsebenzi wabasunguli, wenza kubo ithole elityhidiweyo. Bathi, Ngabo oothixo bakho, Si rayeli, abakhuphayo ezweni laseYiputa. Ke kaloku uAron ebona oko, wakha isibingelelo phambi kwayo, wamemeza ngelizwi lommemezeli, esithi, Ngomso kuyingqumbo yeNkosi. Bavuka ekuseni, banikela ngeminikelo yokudla, kunye namaxhoba enoxolo, kwaye abantu bahlala phantsi badla, basela, baza bavuka.
Wathi uYehova kuMoses, esithi, Hamba uyehla; abantu bakho owakhuphayo ezweni laseYiputa, bonile. Bakhawuleza balahleka endleleni oye wababonisa ngayo; bazenzele ithole elityhidiweyo, balincenga, baqhumisela amaxhoba kuwo, bathi: Ngabo oothixo bakho, OSirayeli, abakhuphayo yelizwe laseYiputa. Yathi ke uYehova kuMoses, Khangela ukuba aba bantu banzima; ndiyeke, ukuba umsindo wam uvutha kubo, ndibabhubhise, ndibe nguhlanga olukhulu.
UMoses wancenga uYehova uThixo wakhe, wathi, Yini na ukuba, Nkosi, ingqumbo yakho evuthayo ebantwini bakho, owabakhuphayo ezweni laseYiputa, ngamandla amakhulu nangesandla esinamandla? AmaYiputa makangathi, Ndiyancenga; Wabakhupha, wawabulala ezintabeni, wabatshabalalisa emhlabeni; Vumelani umsindo wakho, uthuthuke ngenxa yobubi babantu bakho. Khumbula uAbraham, uIsake, noSirayeli, abakhonzi bakho, owafunga ngabo ngokwakho, uthi, Ndiya kwandisa imbewu yakho njengeenkwenkwezi zamazulu; eli lizwe lonke endikuthethile, ndiya kuninika imbewu, uze ulidle ngonaphakade. Yaye uNdikhoyo wayenqwenela ukwenza okubi awayewathethile ngabantu bakhe.
Wabuya ke uMoses entabeni, ethwele iibhebhe zombini zesingqino ngesandla sakhe, ebhalwe ngamacala omabini, Wenziwa ngomsebenzi kaThixo;
Wathi uYoshuwa ukuvakala kwengxolo yabantu abememezayo, wathi kuMoses, Ingxolo yeentaba ivezwe ententeni. Kodwa yena waphendula wathi: Akunjalo ukukhala kwabantu abakhuthazayo ukuba balwe, okanye ukumemeza kwabantu ukuba babaleke ukuba babalekele; kodwa ndiva ilizwi leemvumi. Ke kaloku, xa esondela kwenkampu, wabona ithole, neengqungquthela; wavutha ngumsindo, waphonsa amacwecwe esandleni sakhe, wawaphulaphula entabeni yentaba; wabamba ithole wayeyitshise, wayitshisa, wayibetha ibe ngumgubo, wawalela emanzini, wanika wona oonyana bakaSirayeli ukuba basele.
UkuFunda kweZibhalo ngolwesithathu kwiveki yesithathu yeLente
Umbingeleli onomsebenzi. engachazwanga
UThixo Uyazibonakalisa kuMoses
Xa iNkosi yabonakalisa kuMoses entabeni yaseSinayi , akazange ambonise uMoses ubuso bakhe. Sekunjalo, ubuqaqawuli beNkosi bubukhulu kangangokuthi uMoses ngokwakhe ubonakalisa kuyo. Ehla eNtabeni yaseSinayi, ubuso bakhe bhanya ngokukhawuleza kangangokuthi kwafuneka azinxibe ngesigqubuthelo.
Ukukhanya kukaMoses kusikhumbuza ngokuguquguquka , xa uMoses noEliya bevela noKristu kwiNtaba iThabor. Olu bhanya lubonakalisa inguqu yangaphakathi apho onke amaKristu abizelwa khona. Umoya Ongcwele, ngobabalo Bakhe, usitshintshisa sibe ngumfanekiso kaThixo.
IEksodus 33: 7-11, 18-23; 34: 5-9, 29-35 (iDayay-Rheims 1899 yaseMelika)
UMoses wayithatha umnquba, wamisa ngaphandle kwekampu kude, wabiza igama layo, umnquba womnqophiso. Kwaye bonke abantu abanombuzo, baphuma waya emnqubeni womnqophiso, ngaphandle kwekamu.
Kwathi xa uMoses ephuma waya emnqubeni, bonke abantu basukuma, bonke bema emnyango wendlu yakhe, babona umva kaMose, wada waya emnqubeni. Kwathi ekungeneni komnquba womnqophiso, wehla intsika yelifa, wema emnyango, wathetha noMoses. Bambona bonke ukuba intsika yelifu imi emnyango wetente. Bema, banqula eminyango yeentente zabo. Wathetha uYehova kuMoses ubuso nobuso, njengokuba umntu ethanda ukuthetha nomhlobo wakhe. Ekufikeni kwakhe emkhosini, umkhonzi wakhe uYosefu unyana kaNun, umfana, wasuka emnqubeni.
Wathi yena, Ndibonise ubuqaqawuli bakho. Waphendula wathi: Ndiya kukubonisa konke okulungileyo, ndiyakuvakalisa egameni leNkosi phambi kwakho; ndibe nenceba kuye ndiyathanda, ndibe nenceba kuye ondikholisayo. Waphinda wathi: Awunakuboni ubuso bam; ngokuba umntu akayi kundibona, aphile. Waphinda wathi: Khangela, kukho indawo nam, uze ume phezu kweliwa. Xa ubuqaqawuli bam buya kudlula, ndiya kukubeka emgodini wedwala, ndikukhusele ngesandla sam sokunene, ade ndidlule. Ndiya kususa isandla sam, ubone iindawo zam emhlane; kodwa ubuso bam awukwazi ukubona.
Ke kaloku, xa iNkosi ihlile efwini, uMoses wema kunye naye, ebiza igama leNkosi. Wayegqitha phambi kwakhe, wathi: "Nkosi, Nkosi uThixo, onenceba nomnene, onomonde, onenceba enkulu, enyanisekileyo, ogcina inceba kumawaka; owususa ubugwenxa, nobubi, nesono, Umntu ongenacala phambi kwakho. Ngubani owenza ubugwenxa booyise kubantwana, nakubantwana, kubazukulwana, ukuya kwisizukulwana sesithathu nesine. Wenyuka ke uMoses, wawa ngobuso, wawa ngobuso, wathi: Ukuba ndifumene inceba emehlweni akho, Nkosi, ndiya kukuncenga ukuba uyahamba nathi, kuba ngabantu abantamo, sithwale ubugwenxa bethu nesono, kwaye sihlale nathi.
Ke kaloku, xa uMoses wehla entabeni yeSinayi, wayibamba iileta zombini zobubungqina, engazi ukuba ubuso bakhe bubukhali entlanganisweni yeNkosi. UAron noonyana bakaSirayeli babubona ubuso bukaMoses, babesaba ukuba basondele. Babizelwa nguye, babuya, uAron kunye nabaphathi bebandla. Emva koko wathetha nabo. Bonke oonyana bakaSirayeli beza kuye; wabayala bonke awayekuvile eNkosini entabeni yaseSinayi.
Wathetha ukuthetha, wafaka isigqubuthelo ebusweni bakhe. Ke kaloku, xa wangena eNkosini, wathetha naye, wamthabatha, wada wafika, waza wathetha ke koonyana bakaSirayeli zonke izinto ezaziyalelwe kuye. Bambona ukuba ubuso bukaMoses xa ephuma bebukhali, kodwa wabuya wambona ubuso bakhe kwakhona, ukuba nanini na athetha nabo.
Ukufunda kweZibhalo ngeLwesine kwiveki yesithathu yeLente
Bha yibhile yeLatini. Myron / Getty Izithombe
Enye inguqu yeNcwadi yesivumelwano
Incwadi yeEksodus inikezela ngeencwadana ezimbini zeNcwadi yesiTyano, kwaye ukufunda namhlanje kuyona yesibini. Sibona ukubuyiswa kweMithetho elishumi kunye nemfuneko yokubhiyozela iPasika . Inomdla kakhulu, mhlawumbi, kukuba uMoses wazila ukutya iintsuku ezingama-40 nobusuku xa iNkosi ibonisa iinkcukacha zomnqophiso wakhe namaSirayeli.
Ngokukhawuleza kwakhe, uMoses wamkela uMthetho. Ngokuzila ukutya kweentsuku ezingama-40 ngonyaka, sikhula ngobabalo lukaYesu Kristu, ukuzaliseka koMthetho.
IEksodus 34: 10-28 (Douay-Rheims 1899 yaseMelika)
UYehova waphendula wathi: Ndiya kwenza umnqophiso emehlweni abo bonke. Ndiya kwenza iimpawu ezifana nokungabonakaliyo emhlabeni, nakulo naluphi na isizwe; ukuba aba bantu, phakathi kwakho, babone umsebenzi owonakalisayo weNkosi endiya kuyenza.
Yigcine yonke into endikuyala ngayo namhlanje; ndiya kuxosha phambi kobuso bakho ama-Amori, namaKanan, namaHeti, namaPerezi, namaHevi, namaYebhusi. Qaphela ukuba ungabandakanyeli ubuhlobo nabemi beli lizwe, okuyiyo intshabalalo yakho; utshabalalise izibingelelo zabo, uchithe izithixo zabo, unqumle ama-altare abo.
INkosi igama lakhe linguYhwele, unguThixo onomona. Musa ukwenza umnqophiso namadoda alawo mazwe, hleze, xa behenyuze noothixo babo, bawacebise izithixo zabo, kuthiwa kuthiwa udle izinto ezidiniweyo. Uze ungathabathe umfazi umfazi weentombi zabo, hleze bafeze, bona boonyana bakho bahenyuze noothixo babo.
Ungazenzeli naluphi na oothixo abutyhidiweyo.
Wugcine umthendeleko wezonka ezingenagwele. Iintsuku ezisixhenxe uyakudla isonka esingenagwele, njengoko ndakuyalela ngethuba lwenyanga yesibhokhwe esitsha; ngokuba kwanyuka entwasahlobo yaseYiputa.
Yonke inkunzi yendoda, evula isizalo, iya kuba yam. Kuzo zonke izilwanyana, zombini zeenkomo neyezimvu, kuya kuba ngam. Umzibulo weesile uya kuzihlawulela ngeegusha; kodwa ukuba awuyi kunika ixabiso layo, liya kubulawa. Amazibulo oonyana bakho uya kuwakhulula; ungabonakali phambi kwam ngaphandle.
Uze usebenze iintsuku ezintandathu, umhla wesixhenxe uyayeka ukulima, nokuvuna.
Uwugcine umthendeleko weeveki kunye nentlahlela yokuqala yengqolowa yakho yengqolowa, kunye nomthendeleko xa ixesha lonyaka libuyiselwa kuzo zonke izinto.
Izihlandlo ezintathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho baya kubonakala emehlweni kaYehova uSomandla, uThixo kaSirayeli. Ngokuba xa ndiza kuthatha iintlanga ebusweni bakho, ndize ndandise imida yakho, kungabikho mntu uya kulala ezweni lakho, xa uthe wenyuka, ubonakale emehlweni kaYehova uThixo wakho kathathu ngonyaka.
Uze unganikeli ngegazi lombingelelo wam phezu komvubelo; akuyi kusala kusasa nantoni na ixhoba leNkosi.
Eyokuqala kweziqhamo zomhlaba wakho uya kuzinikela endlwini kaYehova uThixo wakho.
Ungabilisa inkunzi yebhokhwe ebisi lomdama wayo.
Wathi uYehova kuMoses, Bhala la mazwi endiwenze umnqophiso kunye nawe kunye noSirayeli.
Wayekhona kunye neNkosi iintsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane; akayidlanga isonka, akasela amanzi; wabhala etafileni amazwi alishumi yomnqophiso.
Ukufunda kweZibhalo ngeLwesihlanu kweveki yesithathu yeLente
IBhayibhile edala ngesiNgesi. Izithombe ze-Godong / Getty
INgcweliso kunye neTyeya yomnqophiso
Ukufunda namhlanje kwiNcwadi yeEksodus ngenye yeevesi ezicacileyo zeTestamente Endala esihlala siyidlula. Kodwa iCawe ifaka apha apha kwi-Ofisi yeZifunde zeLente ngesizathu.
U-Israyeli, njengoko sibonile, luhlobo lweTestamente eNdala yeTestamente eNtsha yeTestamente, kwaye sinokukubona oku nakwiinkcukacha zokwakhiwa kwetente engcwele kunye neTyeya yomnqophiso , okumele kusikhumbuze ngemitempile yethu amabandla apho iBhunga likaKristu ligcinwe khona.
IEksodus 35: 30-36: 1; 37: 1-9 (iDayay-Rheims 1899 yaseMelika)
Wathi uMoses koonyana bakaSirayeli, Yabonani, uYehova ubize igama linguBhetelehele unyana kaUri unyana kaHure wesizwe sakwaYuda. Wamzalisa ngomoya kaThixo, ngobulumko nangengqondo nangolwazi nakuzo zonke izifundo. Ukuceba kunye nokusebenza ngegolide nesilivere kunye nobhedu, kunye nokuqoshwa kwamatye, kunye nomsebenzi wabachweli. Yonke into enokuyilungisa ngokuqinisekileyo, uyibeke entliziyweni yakhe: uOliyabhi unyana ka-Ahikameki wesizwe sakwaDan; bobabini yena uwalumkileyo ngobulumko, ukuba enze imisebenzi yabachweli kunye neempuphu, kunye nemisonto eluhlaza okwesibhakabhaka nebomvu, obomvu ngengubo ephindwe kabini, nelinen ecikizekileyo, kunye nokucoca zonke izinto, nokuvelisa zonke izinto ezintsha.
Ke kaloku uBeseleli, noOholiyab, nayo yonke indoda eyilumko, inikwe iNkosi ingqiqo nokuqonda, ukuba wazi ukusebenza kakuhle, wenza izinto eziyimfuneko ekusetyenzisweni kweengcwele, nokuba yiNkosi.
UBheseliyeli wenza iinqanawa zomthi womthi; zaziikubhite ezimbini, nesigamu ubude; ububanzi babuyikubhite kunye nesiqingatha; ngaphandle. Wenza isithsaba segolide ngeenxa zonke, wafaka amakhonkco omane egolide emagumbini ayo omane; amakhonkco amabini ngakwesinye icala, kunye neyesibini kwenye. Wenza imivalo yomthi womthi, wayigubungela ngegolide; wawafaka emacongolweni asemacaleni enqanawa ukuba ayithwale.
Wenza umnikelo wokuhlawulela, oko kukuthi, i-oracle, yegolide ecocekileyo, iikubhite ezimbini kunye nesiqingatha ubude, kwaye ububanzi bube yingalo nesiqingatha. Iikherubhi ezimbini zegolide ezibethekileyo, azibeka emacaleni amabini ahlambulukileyo: enye ikherubhi ephezulu kwecala elinye, enye ikherubhi ephezulu ngaphesheya; iikherubhi ezimbini kwiimbombo zombini zokuhlawulela, zisasaza namaphiko abo, kunye nesigqubuthelo, kunye nokujonga kwelinye, kunye naso.
Ukufunda kweZibhalo ngoMgqibelo weveki yesithathu yeLente
Iintente zeVangeli zeSt. Chad eLichfield Cathedral. UFilipu Umdlalo / i-Getty Izithombe
Ifu leNkosi lihla eTabernakele
Ngokufunda namhlanje, sibona ezinye iinkcukacha malunga nokwakhiwa kwengcwele kunye neTyeya yomnqophiso . Emva kokuba kwakhiwe ukwakhiwa, iNkosi yehla emnqubeni efwini. Ubukho belifu laba ngumqondiso wamaSirayeli ukuba ahlale kwindawo enye. Xa ilifu liphakanyisiwe, baya kuhamba.
Kwiintenteni kwiicawa zethu, uKristu ukhona kwiSramramente Ebusisiweyo, kungekhona kuphela emzimbeni kodwa kubukho bakhe. Ngokwesiko, umnquba wawubekwe kwisibingelelo esiphakamileyo, esasempumalanga, ngokubhekiselele ekuphumeni kwelanga, okubonisa uKristu ekhokelela kwiLizwe Lesithembiso sezulu, njengoko iNkosi yahokela amaSirayeli kwiLizwe eliThenjisiweyo .
IEksodus 40: 16-38 (Douay-Rheims 1899 yaseMelika)
UMoses wenza konke uYehova akuwisele umthetho ngako.
Ngoko ngenyanga yokuqala yonyaka wesibini, ngowokuqala lwenyanga, umnquba wamiswa. Wawususa uMoses, wawabeka iiplanga, nezibonda, nemivalo, wazimisa iintsika, wawahlalisa phezu komnquba, wawubeka phezu kwayo isigubungelo, njengoko uYehova wayalele. Wafaka ubungqina emkhombeni, wafaka imivalo phantsi, kunye nesicaciso esingentla. Ke kaloku, ekungeneni ityeya emnqubeni, wawugubungela isigqubuthelo phambi kwawo ukufeza umyalelo weNkosi. Wabeka itafile ententeni yobungqina ngasentla, ngaphandle kwesigqubuthelo, Wahlala apho ukuze apheke izonka, njengoko uYehova wamwisele umthetho kuMoses. Wabeka isibane sesibane kunye nomnquba wobubungqina malunga netafile ngasezantsi, Ukubeka izibane ngokulandelelana, ngokwemithetho yeNkosi.
Wabeka isibingelelo segolide phantsi kophahla lobubungqina ngokubhekiselele kwesigqubuthelo, wasitshisa isiqhumiso sempepho, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses. Wabeka nokuxhoma ekungeneni komnquba wobubungqina, nesibingelelo sesibingelelo sokungena kweengqino, wayinikela umbingelelo, nemibingelelo phezu kwayo, njengoko uYehova wamwisele umthetho. Wabeka umcengezi phakathi komnquba wobubingeleli nesibingelelo, wawuzalisa ngamanzi. UMoses noAron, noonyana bakhe, bahlamba izandla neenyawo zabo, beza emnqubeni womnqophiso, baya eqongweni, njengoko uYehova wamwisela umthetho uMoses. Wamisa nenkundla malunga nomnquba kunye nesibingelelo, ekhunjulwa ekungeneni kwayo.
Emva kokuba zonke izinto zifezekiswe, ilifu lamboza umnquba wobubungqina, uzuko lweNkosi lwawuzalisa. Kwakungenjalo noMoses ukuba angene emnqubeni womnqophiso, ilifu limboze zonke izinto nobukhulu bukaYehova bukhanyisa, kuba ilifu laligubungele konke.
Ukuba nanini na ilifu lisuka emnqubeni, oonyana bakaSirayeli bahamba phambili ngemikhosi yabo: Ukuba bebambelele, bahlala endaweni efanayo. Ngokuba ilifu leNkosi lalingamela phezu komnquba emini, nomlilo ebusuku, emehlweni abo bonke oonyana bakaSirayeli kuyo yonke indawo yabo.
Ngaba iCawa yeZiqu zintathu?
Ngukuphi Usuku LukaSt. Nicholas?
Ixesha leKrisimesi liqala nini?
Iimpawu zeNyanga: inyanga e-Leo
Indlela yokufaka iRack Steering Rack
Imbali yeemoto ze-USA Excelsior
Umlawuli waseRoma waseByzantine uJustinian
Iimpapasho eziPhezulu eziPhambili Ukufunda Nsuku zonke
Uludwe lweMveli yeeLungelo loLuntu kunye nezoBulungisa beNtlalo
Indlela yokudlala ukhuseleko oluqinileyo
Iimagazini zeXesha le-19
UkuPapashwa koNyulo lukaMongameli
Izikolo Zaseburhulumenteni Zamahala e-Georgia